I-iPhone 8 Plus I-LCD Assembly Yokuthinta Isikrini Sesikrini China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-iPhone LCD Digitizer > I-iPhone 8 / 8Plus i-LCD Digitizer > I-iPhone 8 Plus I-LCD Assembly Yokuthinta Isikrini Sesikrini
Iyahambisana ne-iPhone 8 Plus 5.5 intshi, Iyahambisana ne-iPhone 8 Plus 5.5 amasentimitha, Ukuxazulula izinkinga ezilimaziwe, eziqhekekile, izikrini ezikhishwe, noma izikrini ngokubonisa noma izinkinga zokuphendula. Ukuhlolwa kabili ngaphambi kokuthumela, inqubomgomo yokubuyisela inyanga ezintathu kanye newaranti. I-LCD ayifuni nanoma iyiphi ibhodlela lasekhaya, ucezu lwendlebe noma ikhamera yangaphambili; udinga ukususa ngokucophelela kusuka kusikrini sokuqala kuya esisha. siqinisekisa 100% Kuhlolwe yiqembu le-QC lochwepheshe, izinyanga ezingu-12 ukubuyiselwa kwenqubomgomo & iwaranti. Sinesibopho nganoma yimuphi umonakalo ngesikhathi senkinga yokuthutha noma yekhwalithi.
· IPhone 8 Plus 5.5 intshi LCD Screen kanye Touch Digitizer ngaphandle inkinobho ekhaya
· Lokhu ku-iPhone 8 Plus LCD Digitizer Replacement kufaka phakathi izingxenye njengoba kushiwo ngenhla, ayifaki izingxenye ezincane. Sicela ungawudibanisi noMhlangano we-LCD we-iPhone ngezingxenye ezincane.
1.Sicela uhlole iLCD ukuze uqinisekise ukuthi i-flex cable iyimeko enhle futhi ayikho i-debris ku- adctor connector .
3.Izixazululo: amaphikseli angu-1920x1080 (401ppi we-pixel)